Miyey arintaan ka dhigan tahay in Matthijs de Ligt uusan dooneyn inuu sanado badan sii joogo kooxda Juventus? – Gool FM
(Turin) 17 Luulyo 2019. Daafaca dhalinta yar ee qaranka Holland Matthijs de Ligt ayaa la filayaa inuu heshiis shan sano ah u saxiixo kooxda marwada duqda ah, balse waxaa lasoo warinayaa in lacagaha lagu jabin karo heshiiskiisa aan la dhaqan galin doonin ilaa June 2022.
Xiddigaan tayada wanaagsan ayaa xalay fiidkii soo gaaray magaalada Turin, waxaana la filayaa inuu ka mid noqdo liiska daafacyada ugu qaalisan dunida maadaama 75 Malyan oo Yuuro uu ugu soo wareegayo kooxda difaacaneysa horyaalka talyaaniga.
Waxaa la fahamsan yahay in Matthijs de Ligt uu doonayo in heshiiska lagu daro lacago lagu jabin karo heshiiskiisa, balse aan la dhaqan galin labada sano ee ugu horreysa.
Lacagaha lagu jabin karo heshiiskiisa waxaa si hordhac ahaan loogu sheegay 150 Malyan oo Yuuro, balse sanad walba waxaa ku kordhi doona lacago dheeraad ah oo aan la shaacin.
Isbuucyo ka hor ayey aheyd markii la sheegay inuu 12 Malyan oo Yuuro mushaar ahaan u qaadan doono, waxaana raacsan gunno ku xiran bandhigyadiisa kooxda.
Si kastaba arrinta ah in dib loo dhigayo lacagaha lagu jabin karo heshiiskiisa ayaa cabsi badan keentay, maadaama watqiyadii dambe qaaradda yurub ay ka bilaabatay dhac baahsan oo loo geysto ciyaartoyda muhiimka ah.
Sidoo kalana waxaa la tuhmi karaa in Juventus ay qorshaha ay ku weyn karto xiddigaan ka baaraan dagtay, maadaama uu yahay xiddig tayo wanaagsan oo da’yar waqti badanna laga faa’ideysan karo.
Wargeyska AS oo soo bandhigay go'aanka Dani Ceballos ee mustaqbalkiisa & kooxda ka dhisan Premier League ee u dhaw heshiiskiisa.